सार्वजनिक हुँदै तीन आईफोन यस्ता छन् विशेषता – Life Nepali
सार्वजनिक हुँदै तीन आईफोन यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं (अस) । नेपालका लागि एप्पलको आधिकारिक विक्रेता जेननेक्स्टले शुक्रवार (आज) तीन नयाँ आईफोन सार्वजनिक गर्दैछ । जेननेक्स्टले आइफोन ११, ११प्रो र ११प्रो म्याक्स सार्वजनिक गर्न लागेको हो । एप्पलले ६४, १२८ र २५६ जीबी भेरियन्टमा उपलब्ध गराएको आईफोन ११को मूल्य भेरियन्टअनुसार क्रमशः रू. १ लाख १० हजार ५००, रू. १ लाख १८ हजार ३०० र रू. १ लाख ३४ हजार ४०० तोकिएको छ । उक्त फोन कालो, सेतो, बैजनी, हरियो, पहेंलो र रातो रंगमा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै, ६४, २५६ र ५१२ जीबी भेरियन्टमा उपलब्ध आईफोन ११प्रोको मूल्य क्रमशः रू. १ लाख ५७ हजार २५०, रू. १ लाख ८० हजार ९०० र रू. २ लाख ११ हजार ८०० रहेको छ । उक्त फोन सिल्भर, स्पेस ग्रे, सुनौलो र हरियो रंगमा उपलब्ध छ । त्यस्तै, ६४, २५६ र ५१२ जीबी भेरियन्टमा उपलब्ध आईफोन ११प्रो म्याक्सको मूल्य क्रमशः रू. १ लाख ७२ हजार ८००, रू. १ लाख ९६ हजार ६०० र रू. २ लाख २७ हजार ४०० तोकिएको छ ।
नयाँ फोनका पहिला २०० जना खरीदकर्ताले बेल्किन १० वाटको वायरलेस चार्जर प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, आईफोन ११ र ११प्रोका सबै खरीदकर्ताले स्योरशट स्क्र्याच कुपन र १२ हप्तासम्म प्रतिहप्ता १ हजार एमबी एनसेलको डाटा प्राप्त गर्नेछन् । आईफोन किन्दा सक्कली भ्याटबिल लिन एप्पलले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ । एप्पलका उत्पादनमा भएको १ वर्षको वारेन्टी प्रयोग गर्न ग्राहकलाई आधिकारिक च्यानलबाट मात्र फोन खरीद गर्न आग्रह गरिएको छ ।
Previous निणर्य भएकै स्थानमा वडा कार्यालय बनाउन माग
Next मन्त्री पुनको बङ्गलादेशलाई आग्रह : आउनुस् ऊर्जामा सहकार्य गरौँ